XOG: 10 katirsan ciidanka Puntland oo xabsiga loo taxaabay iyo sababta.
June 9, 2021 Xuseen 4
Puntlandtimes (Garoowe)-Maalmo kahor waxaa duleedka Bari ee magaalada Garoowe laga soo qaaday meydka AUN nin Doctor ahaa oo siweyn looga yaqaaney gobolka Nugaal gaar ahaan magaalada caasimadda ah.
Meydka marxuumka ayaa la geliyey tallaagad kadib markii la waayey cid uu ku cadyahay kiiska dilkiisa inkastoo laba maalmood kadib lagu xabaalay qabuuraha Khayrseexay ee kuyaal duleedka magaalada Garoowe sida ehelkiisu u xaqiijiyeen Puntlandtimes.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaanle Sare Maxamed Aadan Jaamac oo arrintaan wax laga waydiiyey ayaa waxa uu sheegay in kiiskaasi ay weli baaritaan ku hayaan, loona xiray askar dowladda katirsan iyo dad shacab ah.
Waxa uu sheegay in xabsiga la dhigay 10 katirsan ciidanka dowladda iyo 9 dhalinyaro ah oo baastoolado ku hubaysan ayna wada socdeen marxuumka la diley baaritaan kadibna ay soo bandhigi doonaan xogtiisa sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaan kiiskaan xirnay 10 askari oo howlgal kujirey oo ka soo duldhacay dhalinyaro qaylinaysa oo rasaas ridaya, waxaana dhexmartay is rasaasayn iyadoona ay ciidanka iyo 9 dhalinyaro ah oo marxuumka la socotey isku tuurtuureen arrinta kadibna dhammaan xabsiga loo taxaabay” ayuu yiri taliyuhu.
Garoowe Shabaab baa Ku jidhaa
Waa la wada Ogyahay hala Soo qabto ama halagu Kala dareero aaran Jaan baa wado filinka
Waxaan waamaxay? Askartu hadday khaldanaayeen in laxiro waa war lagartay,, haddii laga khaldanaase xiriddoodu waa mid dhaawacaysa isku kalsoonida iuo dhiiranaanta ciidanka dawladda! Puntland waxay tiri askarigii isagoo noo qoran oo shaqaynaya khalaf wax u’dila qabiil looma qabsan karo, magtana dawladdaa bixinaysa, iyadoo saas ay’tahay in askartii iyo raggii ay isku dhaceen xabsi laysugu keeno wax macquul ah ma’ahwlan! Ciidanku middeeda kale waa.inuu xabsi gooni ah leeyahay haddii laga fursan waayo xiriddooda inta baaritaanku socdo!
Waxaan waamaxay? Askartu hadday khaldanaayeen in laxiro waa war lagartay,, haddii laga khaldanaase xiriddoodu waa mid dhaawacaysa isku kalsoonida iulyo dhiiranaanta ciidanka dawladda! Puntland waxay tiri askarigii isagoo noo qoran oo shaqaynaya khalad wax u’dila qabiil looma qabsan karo, magtana dawladdaa bixinaysa, iyadoo saas ay’tahay in askartii iyo raggii ay isku dhaceen xabsi laysugu keeno wax macquul ah ma’ahan! Ciidanku middeeda kale waa inuu xabsi gooni ah leeyahay haddii laga fursan waayo xiriddooda inta baaritaanku socdo!
kan weriyaha see wax u sheegayaa war ama dadka si fiican oo xadaarad leh ugu waran ama naga aamus